Sharafta 9X waxaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa July 23 | Androidsis
Dhowr toddobaad ka hor waxaa jira xan ku saabsan Honor 9X iyo 9X Pro, taas oo noqon doonta tii ugu horreysay ee sumadda leh Kirin 810. Furitaankeedu wuxuu umuuqdaa mid dhow, inkasta oo ilaa iyo hada aysan jirin wax war ah oo ku saabsan goorta aan ka filan karno taleefanadan nooca Shiinaha. Nasiib wanaagse, waxaa jira warar arrintan la xiriira. Waxaan horeyba u haysanay taariikhda gudbintaada.
Uguyaraan marka loo eego sharafta 9X. Maaddaama xilligan aan waxba laga xusin jiritaanka ama soo bandhigida 9X Pro. Laakiin ugu yaraan waxaan ognahay inaannaan sugin waqti dheer imaatinkiisa. Waxay noqon doontaa isla bishaan Julay oo taleefankan uu rasmi yahay.
Soo bandhigida Sharafta 9X waxay dhici doontaa 23-ka July. Marka saddex toddobaad gudahood waxaan ku ogaan doonnaa wax walba oo ku saabsan taleefankan cusub ee sumadda Shiinaha. Waqtigaan la joogo, waxay umuuqataa inay noqon doonto dhacdo daah fur u ah Shiinaha. Markaa waxay u badan tahay inaan sugno illaa Sebtember inta taleefanka laga furayo Yurub.
Telefoonkan waxaa lagu furayaa bartamaha kala duwan ee astaanta. Waxay ballanqaadaysaa inay noqoto mid ka mid ah moodooyinka ugu dhammaystiran ee qaybtan. Markaa waa hubaal inay noqonayso iibiyaha ugu fiican shirkadda, taasoo sii kordheysay dhowr sano. In kasta oo aan hadda wax faahfaahin ah ka haynin.
Waxaa jira warar ku saabsan joogitaanka Kirin 810. In kasta oo aynaan ogeyn inay ku jiri doonto sharaftan 9X ama qaabka loo malaynayo Pro.Si kastaba ha noqotee, si loo isticmaalo processor-kan, waxaan la kulannaa qalab aad u xiiso badan, kaas oo hubaal ah inuu ku siin doono dagaal badan arrintan dhexdhexaad.
Nasiib wanaag, shaki yar ayaan ka takhalusi doonaa. Maamuuska 9X wuxuu rasmi noqon doonaa July 23. Waxay u badan tahay in toddobaadyadan hore ay jiri doonaan warar dheeraad ah oo ku saabsan qalabkan. Sidaa darteed, waxaan si taxaddar leh uga fiirsan doonnaa arrintan ku saabsan waxa laga ogyahay bartankan cusub ee bartamaha Shiinaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Honor 9X wuxuu horey u lahaa taariikh soo bandhigid